Sida loo kiciyo keydinta xogta moobilka ee TikTok | Androidsis
Sida loo kiciyo keydinta xogta moobilka ee TikTok
Mid ka mid ah aaladaha ugu caansan ee la qabatimaa waa, shaki la'aan, TikTok Sababtaas awgeed, way adag tahay in la furo barnaamijka oo kaliya la daawado fiidiyowyo yar ... waxaan si fudud isugu lumin karnaa nafteenna dhexdeeda muddo dheer, ka dibna ku faragelin karnaa waxqabad kasta oo kale, laakiin ka hor intaanad cunin fiidiyowyo fara badan.
Waxaan kugula talineynaa inaad ku isticmaasho TikTok xiriir Wi-Fi ah, maxaa yeelay sidan ayaan uga fogaaneynaa cunista xirmada macluumaadka moobilka, oo saacado yar gudahood lagu qaadan karo haddii aan u isticmaalno TikTok si joogto ah oo joogto ah, iyo xitaa intaa ka sii badan haddii qorshaha xogta. waxaan haysanaa waa sabool. Weli, haddii aadan haysan Wi-Fi oo aad rabto inaad daawato fiidiyowyada TikTok haa ama haa, Hawsha keydinta xogta moobilka ee aan uga soo hadalnay casharkaan cusub ee fudud ayaa laga yaabaa inay adiga waxtar kuu leedahay.
Sidan ayaad ku hawlgelin kartaa hawsha keydinta xogta moobilka TikTok
Haddii aadan haysan Wi-Fi, kuma xirmi kartid shabakadda Wi-Fi, ama meesha aad joogto, waxaad haysataa oo keliya xog moobil ah, aaladda xogta lagu keydin karo ayaa kuu shaqeyn doonta. Dabcan, waa inaad maanka ku heysaa in haddii tan la hawlgaliyo, fiidiyowyada TikTok lagu soo saari doono tayo ka hooseysa. Sidoo kale, shaqadu wax saameyn ah kuma yeelanayso markay ku xiran tahay shabakadda Wi-Fi.
Sida loogu daro saamaynta fiidiyowyadaada TikTok
Hadda haa, habkan waxaad si fudud ugu hawlgelin kartaa:
Fur arjiga oo, mar alla markii aad kujirto is dhexgalka, dhagsii Yo, astaanta qofka ee ku taal geeska midig ee hoose ee shaashadda.
Markaa dhagsii saddexda dhibic ee iswaafaqsan ee toosan ee geeska kore ee midig.
Ka dib, hel qaybta ka mid ah Cache iyo xogta moobiilka, iyo sanduuqa Keydinta Xogta, Tan dambe waa inaad riixdo.
Horeba Keydinta Xogta, riix batoonka si aad u hawlgeliso shaqada. Halkan waxaa habboon in la ogaado in, marka loo eego, ay naafo tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo kiciyo keydinta xogta moobilka ee TikTok
Samsung ayaa tartan ka bilawday barta 'Instagram' waxayna siisaa Galaxy S21 5G fiidiyowga asalka ah